Ndị na-ebubata larịị China na-abụghị PVC Soft Bag Production Line IVEN
Usoro Nweta Ngwọta IV - Akpa dị nro LVP
Nri ihe nkiri, ibi akwụkwọ
Ọ nwere ike na -enye ihe nkiri na -akpaghị aka na -ebi akwụkwọ na ebe a na -emepụta ihe, a na -edozi mpịakọta ihe nkiri ahụ site na njigide cylinder dị mfe. Ndozi ahụ achọghị akụrụngwa na ọrụ aka ọ bụla.
Ịgbatị ihe nkiri na imeghe
Nke a ojii adopts n'ibu film-emeghe efere. Emere mmeghe nke ihe nkiri 100%. Usoro mmeghe ihe nkiri ọ bụla enweghị nkwa nke 100%, mana sistemụ a dịkwa mgbagwoju anya.
Igwe ịgbado ọkụ n'akụkụ akụkụ ya na ihe eji akpụ ihe mepere emepe, a na -emepe ebu na ala na -ebikọ ọnụ yana kwadebere ya na efere jụrụ oyi, iji kpoo ma ebu n'otu ọnọdụ okpomọkụ ruo 140 ℃ na karịa. Enweghị ihe nkiri a kedụrụ n'ọkụ mgbe a na-akpụ akpa ma ọ bụ na-akwụsị igwe. Meziwanye ogo ịgbado ọkụ ngwaahịa ma chekwaa ihe nkiri ọzọ.
Ọdụ ụgbọ mmiri nke 1 na nke abụọ
N'ihi ihe dị iche iche na ọkpụrụkpụ n'etiti ọdụ ụgbọ mmiri na ihe nkiri ahụ, ọ na-anabata ikpo ọkụ 2, ịgbanye akara ọkụ 2 na ịgbado ọkụ 1 dị mma iji mee ka ọ dabara na ihe dị iche iche plastik na ihe nkiri, weta onye ọrụ nhọrọ karịa, ogo ịgbado ọkụ dị elu, ọnụego mgbapụta dị ala n'ime 0.3 ‰.
Nabata nha E + H massmeter flowmeter na sistemụ njupụta dị elu.
Izi ezi zuru oke, enweghị akpa na enweghị akpa ruru eru, enweghị ndochi.
Ọkwa mkpuchi ọ bụla ịgbado ọkụ na -eji ịnya ụgbọ ala dị iche iche, a na -ezobekwa otu draịva na ntọala, na -eduzi iji eriri ahịrị, na -enweghị akara na irighiri ihe ọ bụla, hụ na ogo ngwaahịa pụtara ìhè.
Ebe mmepụta akpa
A ga -ewepụta ngwaahịa ndị emechara site na -ebuga eriri na usoro ọzọ.
1. Otu ahịrị mmepụta nwere ike ime ụdị akpa 2 dị iche iche nwere ọdụ ụgbọ mmiri siri ike ma ọ bụ abụọ.
2. Ọdịdị kọmpat, pere mpe nwere oghere.
3. PLC, ọrụ dị ike, arụmọrụ zuru oke na njikwa ọgụgụ isi.
4. Ihuenyo mmetụ aka n'ọtụtụ asụsụ (Chinese, English, Spanish, Russian etc.); Enwere ike idozi data dị iche iche maka ịgbado ọkụ, ibi akwụkwọ, ndochi, CIP na SIP dị ka ọnọdụ okpomọkụ, oge, nrụgide wdg, nwekwara ike bipụta ya ka achọrọ.
5. Nnukwu draịva jikọtara moto servo ebubata na eriri synchronous, ọnọdụ ziri ezi.
6. Mkpọchi na-ekpo ọkụ na-anaghị akpọtụrụ iji zere mmetọ na ịwụfu mmiri, tọgbọ ikuku tupu ị kaa akara.
7. Mita igwe na-asọba dị elu na-enye ndochi zuru oke, enwere ike idozi olu ya n'ụzọ dị mfe site na iji igwe igwe.
8. Nnweta ikuku ikuku na ikpochapu ikuku, obere mmetọ, mkpọtụ dị ala, ihe a pụrụ ịdabere na ya na ọmarịcha ya.
9. Igwe na -ama jijiji mgbe ọnụọgụ oke gafere ihe edoziri.
Ihe mmemme ahụ nwere ike chọọ ma gosipụta isi ihe na -enyo enyo na ihuenyo mmetụ ozugbo nsogbu mere.
11. Ncheta siri ike. Enwere ike ịchekwa ịgbado ọkụ na ihe ndochi n'ezie, mgbe ịgbanwere ihe nkiri na ihe ọ differentụ differentụ dị iche iche, enwere ike iji ihe echekwara ozugbo na -enweghị nrụgharị.
12. CIP na SIP pụrụ iche iji chekwaa oge nhicha ma hụ na ọ bụ ịga ụlọ ọgwụ nke ọma.
13. Ntọala oke yana nchedo onwe onye, ​​enwere ike iji data site na ihuenyo mmetụ, tọọ ntọala kacha na uru kacha nta iji zere mmejọ mmadụ.
14. Nkọwapụta nke 100/250/500/1000ml wdg, naanị mkpa ka ị gbanwee ebu na nbipụta ka ịgbanwere ụdịdị dị iche iche, ngwa ngwa, ngwa ngwa.
Nke gara aga: PP Bottle IV Ngwọta Mmepụta Nweta
Osote: Multi Chamber IV akpa Production Lline
Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Igwe eji emejuola agịga, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Igwe Ampoule À Coudre Led, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Ampoule Machine À Coudre Bernina,